Su – Malag@sy Miray
Miala tsiny aho aloha fa ho entiko any amoron-tsiraka atsinanana indray ianareo. Sao mantsy misy hilaza indray any ho any hoe, angaha dia ao amorontsiraka atsinanana ao ihany no misy zavatra. Io anefa no mba fantatro ary izay mba fantatro ao no tanteriko. Misy zava-maniry iray hita matetika eny anaty rano. Be vatana izy io ary mety hahatratra sahabo eo ambany kelin’ny roa metatra eo ny hahavony ary mitangorongorona izy ireo matetika. Maintso dia maintso ny raviny ary manahaka ny ravin-tsaonjo fa maranitra kosa ny tendrony ary matetika misandrahaka manakatra ny lanitra fa tsy mitanondrika toa ny an’ny saonjo. Via no fiantsoana azy any amin’ny Betsimisaraka. Tsy fantatro ny anarany…
Su	6 Commentaires
Inona angaha izany hoy ianao? Raha mandeha any aminsquowhawydiny faritra atsinanansquowhawydi Madagasikara iny ianao dia hahita fontsy be dia be, misy miteronterona eny ambony tendrombohitra ngazana toa miantsy ny zava-maitso hoe mba miakara ety raha mahatanty, ny sasany kosa miara-milenodenoka eny ansquowhawydala aminsquowhawydny hazo sy ny zava-maitso hafa isan-karazany. Na i Madagasikara aza no fiaviansquowhawydny fontsy dia hita eran-tany izy io, naparitaky ny olona noho ny hatsarany. Fa tsy izay hatsarany izay loatra no ho tanteriko eto fa ny fampiasansquowhawydny olona azy. Efa samy mahafantatra daholo angamba isika hoe inona no atao hoe trano ravim-pontsy na trano falafa. Ny fontsy ny fitaovana hanaovana azy io. Araka ny anarany izany moa…
Su	9 Commentaires